Xiaomi na-ekpughe otu o si mee na nkeji nke mbụ nke 2019 na akụkọ gbasara ego | Gam akporosis
Xiaomi na-aga n'ihu na-eme nke ọma n'ahịa ahịa ama, na oge a ọ na - egosiputa ya na akụkọ gbasara ego nke nkeji nke mbụ nke afọ a, bụ nke ọ na - akọ na uto uru net gbanwere nke 22,4% kwa afọ maka nchịkọta nke ihe karịrị ijeri yuan 2,600 (Ihe dị ka 330 nde euro), ma e jiri ya tụnyere 2.100 ijeri yuan (ihe ruru nde euro 272) ọ kpatara n'afọ gara aga.
Ọ kọkwara na Mkpokọta ego ha nwetara bilitere 27.2% na yuan 43.8 (ihe ruru nde euro 5,712). Largestlọ ọrụ kachasị enweta ego maka ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-abụ azụmaahịa ekwentị. Ihe ndi ozo banyere akuko a n’okpuru ...
Xiaomi na-achị ahịa ekwentị ugbu a na India ma na-eme nke ọma na mba ndị ọzọ na-abụghị nke ahịa obodo ya bụ China. Azụmaahịa mba ụwa wepụtara ihe karịrị 38% nke ngụkọta ego ha nwetara na nkeji nke mbụ, nke na-anọchite anya ịrị elu 35% na ngalaba a. Mgbasa ozi nke Xiaomi na mba ofesi biara na onodu mba uwa na mpaghara a, nke di nkpa.
Dị ka akụkọ Canalys si kwuo, Xiaomi bụ onye nke anọ kachasị na-eme ekwentị na ụwa site na nkeji ndị e webatara na nkeji iri na ise. Tụkwasị na nke ahụ, ngalaba 'IoT na ụdị ndụ' nke ụlọ ọrụ ahụ, nke nwere ọtụtụ ngwa ngwa ụlọ, mụbara ego ya si na 22,4% gaa na 27,5% kwa afọ. Companylọ ọrụ ahụ na-ekwu na uto na nke a bụ nke mbụ TV ahịa na-achịkwa, ebe ọhụrụ maka ụlọ ọrụ ahụ.
Na Jenụwarị Xiaomi ekwuputala ọkwa 0,48% na onye na-eme TV. Nke a na-eme ka njikọ dị n'etiti nke usoro sistemụ Xiaomi jikọtara ya na ngwaahịa TCL.
Ruo mgbe ngwụsị nke March, ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ọ bụ na-ahụ maka ndị ọrụ dị nde 261 kwa ọnwa site na MIUI OS arụnyere na ngwaọrụ niile, nke na - anọchite anya afọ ọ bụla na 37,3%. Ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ IoT, na-ewepu smartphones na laptọọpụ, amụbawo site na 70%, iji ruo ihe dịka 171.0 nde nkeji.
Xiaomi na-agbasi mbọ ike ime ka ngwanrọ na ọrụ ịntanetị ya dịkwuo elu, mana ka ọ dị ugbu a, atụmatụ ahụ adịchaghị irè, na-atụle 9.7% nke ngụkọta ego ụlọ ọrụ ahụ, ma e jiri ya tụnyere 9.1% n'afọ gara aga. Companylọ ọrụ ahụ ekwuola na ọ ga-enweta ihe karịrị 5% nke uru sitere na azụmaahịa ngwaike, ya mere, ọ bụ ihe ezi uche dị na Xiaomi ilekwasị anya na ngwanrọ na ọrụ ịntanetị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Xiaomi na-ekpughe otu o si mee na nkeji nke mbụ nke 2019 na akụkọ gbasara ego ya